महोत्तरीकी मञ्जु: जसको सास नै बोझ बन्यो ! - The Public Today
महोत्तरीकी मञ्जु: जसको सास नै बोझ बन्यो !
महोत्तरी, साउन ५ गते । पाउदेखि कम्मरसम्म घाउ नै घाउ छ। घाउ पिलिएर सहिसक्नु छैन। उपचार गर्न मन छ तर खर्च छैन। यस्तै पीडाले छटपटाइरहेकी छन्, १६ वर्षीया मञ्जुकुमारी ठाकुर। लाउँलाउँ, खाउँखाउँ भन्ने उमेरमा मञ्जु तीन वर्षदेखि ओछ्यानमै थला परेर बसेकी छन्।
गाउँमा पुग्ने, हिँड्नेलाई झ्यालबाट हेरेर उनी चित्त बुझाउँछिन्। झ्यालबाट सडकतिर आँखा डुलाएर दिनमा व्यथा भुल्छिन्। तर, रात परेपछि घाउ दुखेर छटपटी हुन्छ। उनी सुत्न सक्दिनन्। आँखा रसाउँछ। अरूले गर्ने हेला र तिस्कारले मन पोल्छ। बुवाकै अर्घेल्याइँले उनी प्रताडित छिन्। -अन्नपुर्ण पोस्ट